KOTTAA BUNA DHUGAA!–Garuu Miidhaasaafi Faayidaasaa dura adda baafadhaa!!…Hidhaa kana keessa seenaati nadubbisaame!! – Beekan Guluma Erena
KOTTAA BUNA DHUGAA!–Garuu Miidhaasaafi Faayidaasaa dura adda baafadhaa!!…Hidhaa kana keessa seenaati nadubbisaame!!	Beekan Guluma Erena
HEALTH May 10, 2016May 10, 2016OROMO
216SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Bunni guyyaa guyyaan dhugnu faayidaa akkamii qaba? Miidhaan isaahoo maali?
Akkuma beekamu bunni biyya keenya keessatti waantota baay’inaan itti fayyadamnu keessaa isa hangafa jechuun ni danda’ama. Ni xiqqaatti malee namni erga dhalatee buna afaanitti hin geeffatinis jira jedhee hin abdadhu. Yoo dhibellee fooliimti isaa funyaan kan hin seenne hin jiru.
**Garuu faayidaan bunaa maali?
1. Bunni xiqqoon ishee dhandhamnu cinqama sammuu hir’isuu danda’a.
2. Bunni fayyummaa tiruu keenyaaf faayidaa guddaa qaba( keessattuu namoota alkoolii dhuganiif).
3. Bunni miirri gammachuu akka nutti dhagahamu nu taasisa.
4. Bunni carraa dhukkuba daranyoo gogaan qabamuu ni hir’isa(keessattuu dubartootaaf).
5. Bunni carraa dhibee sukkaaraan qabamuu( type 2 diabetes) ni hir’isa.
6. Bunni sochii qaamaa akka gahumsaan hojjennuuf ni fayyada.
Utuu sochii qaamaa hin godhin sa’a tokko dura buna sinii tokko dhuguun ga’umsakee 11% dabaluu danda’a. Kunis keemikaalli buna keessatti argamu ‘Kaafeeyinii’ jedhamu hormoonii ‘adireenaaliinii’ baay’inaan akka maddu waan taasisuufi. Hormooniin ‘Adireenaaliinii’ immoo qaamni keenya sochii qaamaaf akka si’aa’u taasisa.
7. Bunni ulfaatina qaamaa hir’isuu keessatti gahee guddaa qaba.
Keemikaalli buna keessatti argamu , Kaafeeyiniin albuudota Maaginiiziyeemii fi Pootaasiyeemii ofkeessaa qaba. Albuudotni kun immoo qaamni keenya akka Insuliinii sirriitti fayyadamee hamma sukkaara qaama keenya keessaa to’atu taasisu. Haala kanaa bunni ulfaatina hir’isuuf shoora taphata.
8. Bunni faatiin qaama keenya keessaa akka gubatu taasisa.
9. Bunni guyyaatti sinii 1-6 yoo dhugne xiyyeeffannaa fi si’aayina sammuu ni dabala.
10. Bunni dhiigdoo keessoo sammuu (stroke) hir’isuu danda’a.
***Faayidaa bunaa hamma kana erga jennee miidhaan isaahoo maal ta’inna laata? Yoo maal ta’es miidhaa qabaata?
a) Bunni qulqullina hin qabne summaa’aa tahuu danda’a.
b) Bunni hirribaa fi boqonnaa nama dhowwachuu danda’a. Kunis keemikaalli Kaafeeyinii hamma guyyaatti fudhatamuu qabu(400mg) irra yoo darbee dha. Kun garuu nama irraa namatti gargar tahuu danda’a.
c) Buna guyyaatti sinii tokkoo ol dhuguun dubartoota ulfaaf miidhaa qabaachuu danda’a. Akkasumas mucaa garaa keessa jirtutti illee araada kaafeeyinii waan itti baay’isuu danda’uuf wayita ulfaa hamma buna dhugnuu hir’isuun gaariidha.
d) Daa’imman buna baay’inaan yoo dhugan dandeettii fincaan qabachuu isaanii hir’isuu danda’a.Kunis Enuresis( bedwetting) isa jedhamuuf isaan saaxila. Kanaaf daa’imman umurii hamma waggaa torbaa jiran buna hammaan itti baay’isuu irraa of qusachuun gaariidha.
Walumaa galatti bunni akkuma faayidaa hedduu qabu haalaan yoo itti hin fayyadamnu ta’e miidhaas akka qabu hubannee haalaan itti haa fayyadamnu. Fayyummaa sammuu fi qaama keenya biroos haa eeggannu!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa216SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← MIILLIKE SIHAABAASU!—Afoola keessaniin Bohaaraa
MAAL SI GOONE…?Saphaaloo Kadiriin →